Mooshin ka dhan ah wasiirka arrimaha gudaha oo loo gudbiyey Baarlamanka Soomaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mooshin ka dhan ah wasiirka arrimaha gudaha oo loo gudbiyey Baarlamanka Soomaliya
Muqdisho – Mareeg.com: Ilaa 65 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudoonka u gudbiyey mooshin ka dhan ah wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka, C/llaahi Goodax Barre.
Mooshinka ka dhanka ah wasiir Goodax ayaa maanta gacanta loo geliyey gudoonka baarlamaanka Soomaaliya, waxaana mooshinkaas xildhibaanada u aqriyey xildhibaan C/naasir Gaarane.
Xildhibaanada mooshinka ka keenay wasiir Goodax ayaa sheegay in wasiirku uu baarlamaanka qanci waayey markii golaha shacabka looga yeeray ee su’aalo la weydiiyey, islamarkaana sida ay leeyihiin uu sameeyey khaladaad xagga maamulka ah.
Isla maanta ayaa baarlamaanka ka dooday mooshinka laga keenay wasiir Goodax, waxaana hadlay dhowr xildhibaan, kuwaasoo fikrado kala duwan qabay.
Dhawaan ayuu baarlamaanka Soomaaliya u yeeray wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka C/llaahi Goodax Barre iyo wasiirka amniga qaranka C/kariim Xuseen Guuleed, waxaana mid kasta su’aalo laga weydiiyey holwaha wasaaradiisa.
Debadbax lagu taageerayo madaxweyne Xasan oo maanta lagu qabanyo Muqdisho
Muqdisho: Gudoomiye ku xigeen degmo oo ku dhawaaqay inuusan qaadi karin xilkii loo dhiibay